News - Nkowa mkpirisi nke oku oku
Nkowa okwu mkpirisi nke oku oku
Igwe a na-etinye wayo nke a na-ezo aka na lime calcining maka ịwụnye clinker na-aga n'ihu na akụkụ ala nke nri elu. Ọ nwere ahụ ọkụ, na-agbakwunye ma na-ewepu ngwaọrụ yana akụrụngwa ikuku. vetikal wayo n'ekwú nwere ike kere n'ime anọ ndị na-esonụ ụdị dị ka mmanụ ụgbọala: coke oven vetikal n'ekwú ọkụ, coal vetikal kiln na gas vetikal n'ekwú ọkụ. The uru nke vetikal wayo n'ekwú ọkụ bụ na obere isi obodo ego, obere ala ohere, elu arụmọrụ, ala mmanụ ụgbọala oriri na mfe ọrụ.
A na-eji limkone na kol na-etinye nri n'ime nchekwa nchekwa site na forklift. Akụkụ ndị dị ala nke bins nwere ihe mkpuchi na-akpaghị aka. Mgbe ị tụsịrị dabere na ego kọmputa ahụ setịpụrụ, a na-agwakọta limestone na kol. A na-ebuli ngwakọta agwakọta site na ụgbọ ala na-awụlikwa elu site na akwa ahụ nwere mmasị gaa n'elu lime lime ahụ, wee fesaa ya n'ekwú ahụ site na ngwa nnweta na ngwa nri.
Akụrụngwa na-agbadata n'okpuru ike nke ike ndọda ya na ebe a na-etinye ọkụ. Na okpuru oku, igwe ihe mgbọrọgwụ na-eme ka nzu ha dị na ala nke kiln ahụ. Ifufe sitere na ala na-eji okpomọkụ wayo na-etinye okpomọkụ wee banye mpaghara calcining dị ka mmanụ ọkụ mgbe ọnọdụ okpomọkụ ya ruru ogo 600.
Limestone si na kiln kiln na-agafe mpaghara preheating, mpaghara calcining, na mpaghara jụrụ oyi, yana mmeghachi omume kemịkal zuru oke n'okpuru ọnọdụ nke okpomọkụ dị elu iji gbadaa na calcium oxide (wayo). Mgbe nke ahụ gasị, a na-ahapụ ya site na igwe ọkụ site na igwe ikuku diski na ngwa na-ekupụ ash na-arụ ọrụ nke ihapu akara, iji ghọta ifufe na-enweghị nkwụsị.
Tumadi mezue akpaka erikpu akwụ ụgwọ na akara maka Filiks nke inggwakọta, n'ekwú ọkụ calcining na wayo ịrụzu.
(1) Akpaka na ntuziaka usoro na-ma onwem. Ewezuga ọrụ aka nke igbe ọrụ na saịtị, ha niile nwere ike ijikwa kọmputa na ime ụlọ nchịkwa.
(2) A na-egosipụta data nke akụrụngwa niile (dị ka nlele nrụgide, mita na-asọpụta, akụrụngwa) na kọmputa ma nwee ike ibipụta ya site na ngwa nbipute.
(3) zuru oke WINCC mmadụ-igwe interface sistemụ arụmọrụ.
(4) Complete Siemens nwere ọgụgụ isi erikpu modul batching, erikpu na-akwụ ụgwọ usoro.
(5) A pụrụ ịdabere na lime n'ekwú ihe onwunwe gauges, smart nna ukwu na ndị ọzọ na proprietary akụrụngwa.
(6) Sistemụ nlekota igwefoto zuru oke. Ihe onyonyo dị ndụ na-achịkwa data kọmputa na-ejikọtakarị akara njikọ nke usoro mmepụta.
(7) Pụrụ ịdabere na Siemens PLC usoro, inverter na ulo oru kọmputa abụọ-larịị microcomputer nwere ọgụgụ isi usoro.
(8) Enyi na enyi. Dika atumatu nchedo gburugburu na mkpa mmeputa, enwere ike ido ya ya na sistem na-enye ogwu na sistemu imezu ya iji nweta ikuku.
Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium hydroxide akụrụngwa, Calcium Hydroxide Ime, Calcium oxide na Calcium hydroxide, Ime Calcium hydroxide,